Sunday January 26, 2020 - 14:24:23 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay isku fidiyeen deegaanno hor leh oo kulaala xuduud beenaadka.
Maanta barqadii ayay ciidamada wilaayada Islaamiga Hiiraan waxay si nabad gelya ah kula wareegeen gacan ku heynta deegaanka Ceel Cadde oo ku dhowaad 50Km ujira magaalada Beled Weyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Wariye ku sugan Hiiraan ayaa soo sheegay in dadka deegaanka ay ciidamada 'Mujaahidiinta' si diirran ugusoo dhoweeyeen Ceel Cadde, saraakiishii hoggaaminaysay ciidamada XSHM ayaa bartamaha deegaanka ugu muxaadareeyay shacabka.
Majirin wax dagaal ah oo ka dhacay deegaanka Ceel Cadde, maleeshiyaadkii daacadda u ahaa dowladda Itoobiya ayaa la sheegay in xalay saqdii dhexe ay isaga firxadeen deegaanka waxayna ugudbeen dhanka dhulka Somaligalbeed ee Itoobiya gummeysato.
Shalay ayay aheyd markii sidaan oo kale ay xoogaga Al Shabaab ugaareen deegaanka Farlibaax oo 45Km ujira magaalada Beled Weyne, deegaannada xuduud beenaadka dhaca ayaa umuuqda in laga cirib tirayo maleeshiyaadkii daacadda u ahaa Itoobiya.
Guddoomiyaha deegaanka Qooqaani oo isku day dil ka badbaaday.